Top 15 Fududeyn Deeqaha Kanada ee Ardayda
Kanada ayaa ugu sareysa liiska daraasadaha dibadda ee loogu talagalay ardayda adduunka oo idil sababo la xiriira deeqo waxbarasho oo badan iyo nidaamka waxbarasho ee heer qaran ee qaran. Maqaalkan, waxaan ku eegi doonaa deeqaha waxbarasho ee kala duwan ee fudud ee Kanadiyaanka ah ee ay heli karaan ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ahba.
Deeqdan waxbarasho waxaa kafaala qaaday dowladda Kanada, ururrada aan dowliga ahayn, iyo qaar ka mid ah hay'adaha sare ee Kanada.
Haddii aad jeceshahay inaad jaleecdo liiska deeqaha waxbarasho, hubi jadwalka waxyaabaha hoose.
Ma fududahay in deeq waxbarasho laga helo Kanada?
Deeqaha Kanada ee ugu Fiican ee Ardayda
Banting Shahaadooyinka Dugsi-Dheeraadka ah
Shuruudaha Xaq u yeelashada
Abaabulka Cilmi baarista IDRC
Barnaamijka Tacliinta Sare ee Vanier Canada
NSERC Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed
Deeqda-waxbarasho ee Jaamicadda Kanada - Barnaamijka Master
Deeqda Xusuusta Kanada
Sanduuqa Dhaqaalaha ee Anne Vallee
Deeqaha Deeqaha iyo Deeqaha
Deeqaha Tartanka Ardayda ee Caalamiga ah
UBC Deeqaha Shahaadada
Lester B. Pearson Deeqaha Caalamiga ah
Carleton Prestige Deeqo waxbarasho
Winnipeg Deeqaha waxbarasho ee Madaxweynaha Adduunka
Deeqaha Galitaanka Caalamiga ee Calgary
Jaamacadda York University Scholarship
Ku guuleysiga deeqda waxbarasho ee Kanada si aad wax u barato ma sahlanaan karto laakiin waa wax aad loo gaari karo. Tani waa sababta oo ah arday badan oo adduunka ah waxay heleen hal deeq waxbarasho ama mid kale oo ay ku bartaan Kanada.
Tirakoobyadu waxay muujinayaan in ka badan ardayda 2,000 ay helaan illaa 17,000CAD sanadkiiba si ay ugu sii wataan barnaamijyada shahaadada jaamacadaha Canada.
Waxyaabaha soo socda ee fudud ee Kanada ayaa loo heli karaa ardayda si ay ugu maalgeliyaan waxbarashadooda kulliyad ama jaamacad la aqoonsan yahay oo ku taal Kanada:
Dawladda Kanada waxay siisaa ardayda Banting Postdoctoral Fellowships ardayda maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee ku raad jooga daraasadaha jaamacadeed ee cilmiga dabiiciga iyo bulshada ama cilmi baarista caafimaadka.
Sannad kasta, in ka badan 70 weheliyeyaal ayaa la bixiyaa oo loo qaybiyaa si siman Machadyada Canadian Research of Health (CIHR), Golaha Cilmi-baarista Sayniska Dabiiciga ah iyo Injineernimada (NSERC), Iyo Golaha Cilmi-baarista Cilmiga Bulshada iyo Bulshada (SSHRC).
Qiimaha wehelnimadu waa $ 70,000 cashuur laga qaadi karo sanadkii ugu badnaan 2 sano.
Musharrixiinta aan ahayn muwaadiniinta ama deganaanshaha joogtada ah ee Kanada waxay ku haysan karaan oo keliya abaalmarintooda hay'ad Canadian ah.
Codsadeyaasha muwaaddiniinta ah ama deganayaasha joogtada ah ee Kanada oo ka qaatay shahaadada PhD, PhD-u dhiganta ama shahaadada caafimaadka ee jaamacad dibedda ah waxay ku qaban karaan Banting Postdoctoral Fellowship midkood hay'ad Canadian ah.
Musharrixiinta muwaaddiniinta ah ama deggenayaasha joogtada ah ee Kanada oo ka qaatay shahaadadooda PhD, PhD-u dhiganta, ama shahaadada xirfadeed ee caafimaad ee machad ku yaal Kanada ayaa ku yeelan kara wehelnimadooda mid ka mid ah hay'adaha Kanada ama xarun ka baxsan Kanada.
Codsadayaashu waa inay marna hayaa shaqo-socod ama shaqo awood macallinnimo oo kiraysan, mana ka maqnaan karaan shaqadaas oo kale.
Musharrixiinta waa inay haystaan ​​ama haystaan ​​hay'ad gaar ah (CIHR, NSERC, SSHRC) abaalmarinta heerka postdoctoral ka hor codsiga.
Isku xirka deeqda waxbarasho
Xarunta Cilmi-baarista Caalamiga ee Horumarinta (IDRC) waxay siineysaa fursado cilmi-baaris ah dadka reer Kanada iyo ardayda ka socota waddamada soo koraya ee ku daba-jiraya shahaadada dhakhaatiirta jaamacadaha la aqoonsan yahay ee Kanada si ay xal ugu helaan caqabadaha horumarinta adduunka.
Dhanka kale, ardaydan waxaa la siin doonaa maalgelin ay ku sameeyaan cilmi baaris iyo inay helaan khibrad gacmeed oo ku saabsan cilmi baarista iyo maareynta barnaamijka muddo dhan hal sano.
Abaalmarinta Cilmi-baarista ee IDRC waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee Kanada.
Codsadeyaashu waa inay noqdaan muwaadiniin ama degane rasmi ah oo Kanada ah, ama muwaaddiniin waddan soo koraya ah, marka laga reebo waddamada Koonfurta iyo Bariga Yurub, Koonfurta Caucasus, iyo Bartamaha Aasiya (marka laga reebo Afghanistan).
Musharrixiinta waa in loo qoraa barnaamijyo heer-jaamacadeed ah oo laga helo jaamacad laga aqoonsan yahay Kanada.
Qeybta cilmi baarista ee la soo jeediyey ee codsadaha waa inay ka dhacdaa hal ama in ka badan oo waddammada soo koraya ah oo loo qabanayo shahaadada dhakhtarnimada. Intaa waxaa dheer, qaybta cilmi-baaristu waa inay u dhigantaa mudnaanta mowduucyada ee IDRC.
Musharrixiinta waa inay muujiyaan caddeynta ka mid noqoshada hay'ad ama urur ka socda gobolka (yada) soo koraya ee cilmi-baaristu ka dhici doonto.
The Vanier Canada Graduate Scholarships (Vanier CGS) waxaa loogu talagalay in lagu maalgeliyo waxbarashada ardayda heer caalami ah ee takhasuska leh si dib loogu celiyo dalka. Ardaydani waxay sii wadi doonaan inay aasaasaan Kanada oo ah xarun caalami ah oo heer sare ah xagga cilmi-baarista iyo tacliinta sare.
Deeqdani waxay ku wajahan tahay shahaadada dhakhtar (ama isku darka MA / Ph.D. Ama MD / Ph.D.) Sayniska dabiiciga ah iyo / ama cilmi baarista injineernimada, cilmiga bulshada, iyo / ama cilmi baarista aadanaha.
Musharrixiinta waa inaysan waligood qaban, ama qaban, deeq waxbarasho oo heer-jaamacadeed ama is weheshi ka socda CIHR, NSERC, ama SSHRC si ay u qabtaan ama u dhammaystiraan shahaadada dhakhtar.
Codsadeyaashu waa inay celcelis ahaan celcelis fasal ah yeeshaan labadii sano ee ugu dambeysay ee daraasad waqti-buuxa ah ama u dhiganta.
Musharrixiinta waa inay dhammaystiraan wax aan ka badnayn 20 bilood oo ah daraasadaha takhasuska.
NSERC Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed waxaa loogu talagalay inay ku siiso kaalmo maaliyadeed ardayda aadka u fiican ee raadinaya barnaamijka shahaadada jaamacadeed ee sayniska dabiiciga iyo injineernimada. Kaalmadan lacageed waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee Kanada ee fudud ee ardayda ka taageera waxbarashadooda.
Abaalmarinta dadka qaata deeqda waxbarasho ay heli doonaan waxaa ka mid ah kuwa soo socda:
Alexander Graham Bell Deeqda-waxbarasho ee Jaamacadda-Doctoral (CGS-D):
$ 35,000 sanadkii sanadkii muddo 36 bilood ah
NSERC Deeqaha Shahaadada-Dheeraadka ah (PGS-D): $ 21,000 sanadkiiba muddo ah 36 bilood
Musharrixiinta waa inay noqdaan muwaadiniin ama degane rasmi ah Kanada.
Codsadeyaashu waa inaysan haynin, ama qaban, deeq waxbarasho oo heer-jaamacadeed ah ama is weheshi ka socda CIHR, NSERC, SSHRC, ama urur kale oo maal-galinta cilmi-baarista Kanada ah sababo la xiriira jebinta heerarka anshaxa ama sharafta.
Musharrixiinta waa inaysan waligood deyn ku yeelan NSERC oo ay ku jiraan bixinta iyo / ama soo celiyeen wax lacag ah oo lagu leeyahay NSERC.
The Canadian Graduate Scholarships - Barnaamijka Master-ka (CGSM) waxaa la siiyaa ardayda ka qalin jabisay heer sare si ay uga caawiyaan inay horumariyaan xirfadaha cilmi-baarista. Waxaa maamula Tri-Council. Golaha Tri-Council wuxuu deeqdan waxbarasho u qaybiyaa jaamacadaha taasoo muujineysa tirada abaalmarinnada ay hay'ad kastaa siin karto ardaydooda sannad walba.
Qaatayaashu waa inay u adeegsadaan abaalmarinta CGSM ee jaamacadda ku deeqday kaalmada maaliyadeed.n Abaalmarinta CGSM waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee Kanada ee fudud ee ardayda maxalliga ah.
Codsadeyaashu waa inay lahaadaan celcelis heerka koowaad ah (3.5 GPA ama A- celcelis ahaan U of T), mid kasta oo ka mid ah labadii sano ee ugu dambeysay ee daraasadda la dhammeeyey (waqti u dhigma).
Musharrixiinta waa inay iska diiwaangeliyaan, codsadeen, ama waxay dalban doonaan gelitaan buuxa oo ah barnaamijka shahaadada mastarka ama heerka jaamacadeed ee jaamacadda Kanada oo leh qoondaynta CGS M.
Hay'adda 'Canada Memorial Foundation' waxay siisaa deeqda waxbarasho ee masters-ka labada arday ee reer UK ee doonaya inay wax ku bartaan Kanada iyo ardayda reer Kanada ee doonaya inay waxbarashadooda ku sii wataan Boqortooyada Midowday.
Deeqdani waa hal sano oo keliya waxayna dabooli doontaa duulimaadyada, khidmadaha, dayactirka, hoyga, iyo gunnooyinka kale. Si kastaba ha noqotee, ardayda codsaneysa koorsooyinka mudadoodu ka badan tahay sanad waa inay muujiyaan caddeyn lacageed oo dheeri ah oo shaqsiyeed oo u oggolaan doonta inay dhammaystiraan koorsada.
Deeqda waxbarasho ee loo yaqaan 'CMF Scholarship' waa mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee Kanada ee fudud ee loogu talagalay ardayda maxalliga ah iyo kuwa Ingiriiska.
Codsadeyaashu waa inay noqdaan muwaadiniin ama degane rasmi ah Kanada iyo Boqortooyada Midowday.
Musharrixiinta waa inay haystaan, ama filayaan inay qabtaan, fasalka koowaad ama heerka labaad ee Maamuusta sare.
Codsadeyaashu waa inay muujiyaan hoggaamin iyo tayada safiirnimada iyo sidoo kale aqoonsiyo aqooneed oo adag.
Musharrixiinta waa inay muujiyaan xiisaha ay u leeyihiin daraasaddooda ay doorteen iyo sababaha ay u doonayaan inay wax ku bartaan Kanada.
Sanduuqa 'Anne Valle Ecological Fund' (AVEF) waxaa loogu talagalay inay siiso maalgelin ardayda fulineysa cilmi baarista heerka mastarka ama heerka shahaadada jaamacadeed ee jaamacadda ku taal Quebec ama British Columbia. Si kale haddii loo dhigo, gargaarka AVEF wuxuu bixiyaa kaalmo lacageed oo loogu talagalay cilmi baarista cilmiga bey'ada xoolaha, taasoo la xiriirta saameynta howlaha aadanaha sida keymaha, warshadaha, beeraha, iyo kalluumeysiga.
Ku guuleystayaasha ayaa heli doona deeq waxbarasho oo dhan $ 1,500. Deeqda waxbarasho ee AVEF waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee Kanadiyaanka fudud.
Codsadayaasha ka socda Kanada ama dalal kale way dalban karaan.
The Pierre Elliott Trudeau Foundation waxay bixisaa deeqo waxbarasho si ay uga caawiso ardayda takhasuska sare leh ee raadinaya cilmi baarista mid ama in ka badan oo ka mid ah aasaaska Afar Mawduuc: Xuquuqda Aadanaha iyo Sharafta, Muwaadinnimada Masuulka ah, Kanada iyo Caalamka, iyo Dadka iyo Degaankooda Dabiiciga ah.
Ilaa lix iyo toban (16) qof ayaa ka faa'iideysanaya abaalmarintan si ay u maalgeliyaan daraasaddooda darajada dhakhaatiirta iyo sidoo kale tababarka hoggaaminta ee macnaha guud Meelo Geesinimo leh.
Musharrixiinta waa in lagu qoraa waqti buuxa si ay u sii wataan shahaadada dhakhtar ee cilmiga aadanaha ama cilmiga bulshada.
Codsadayaasha deganayaasha ah iyo kuwa aan deganeyn Kanada way dalban karaan.
Tartanka musharrixiinta waa inuu la xiriiro ugu yaraan mid ka mid ah afarta mowduuc ee aasaasiga ah oo ay ku jiraan Xuquuqda Aadanaha iyo Sharafta, Muwaadin Mas'uul ka ah, Kanada iyo Adduunka, Dadka iyo Degaanka Dabiiciga ah.
The Deeqaha Tartanka Ardayda ee Caalamiga ah waxaa loo bixiyaa si loogu caawiyo ardayda wanaagsan. Waxaa kaliya loo fidiyaa ardayda qalin jabisa ee codsada oo uqalma barnaamijka qalinjabinta ee kaqeyb galaya barnaamijka KAS.
Qiimaha deeqda waxbarasho ayaa ku kala duwan $ 500 illaa $ 1,500.
Codsadeyaashu waxay codsan doonaan barnaamijka qalin-jabinta iyagoo adeegsanaya arjiga barnaamijka KAS.
Musharrixiinta waa inay lahaadaan ugu yaraan isku darka GPA ee 3.0 ama ka sareeya.
Codsadeyaashu waa inay diyaar u ahaadaan inay bilaabaan daraasado waqti-buuxa ah xerada dhexdeeda.
Ardayda dhigata shahaadada koowaad waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan.
Gobolka British Columbia wuxuu siiyaa kaalmo maaliyadeed ardayda aadka u fiican inay ku daba galaan barnaamijyada qalin-jabinta iyo cilmi-baarista dhinacyada ay ka mid yihiin sayniska, teknolojiyadda, injineernimada, iyo xisaabta (STEM).
Ka-faa'iideystayaasha waxay heli doonaan $ 15,000 oo deeq waxbarasho ah si ay u daboosho kharashka waxbarashada, buugaagta, iyo ujrooyinka kale ee UBC.
Codsadeyaashu waa inay noqdaan muwaadiniin ama deganaansho rasmi ah ku leh Kanada.
The Lester B. Pearson Deeqaha Caalamiga ah ee Jaamacadda Toronto waxaa loogu talagalay in lagu aqoonsado ardayda caalamiga ah ee muujiya guul gaar ahaaneed iyo hal-abuurnimo iyo kuwa loo aqoonsan yahay inay yihiin hoggaamiyeyaasha hay'addooda.
Intaas waxaa sii dheer, deeqdani waxay dabooli doontaa waxbarashada, buugaagta, hoyga, iyo khidmadaha lama filaanka ah muddada afar sano ah. Gargaarka maaliyadeed waxaa kaliya oo lagu xallin karaa Jaamacadda Toronto oo loogu talagalay ardayda cusub ee soo socota ee shahaadada koowaad. Waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee Kanada ee fudud ee ardayda.
Musharrixiinta waa inay noqdaan arday caalami ah
Codsadeyaashu waa inay ku jiraan sanadkoodii ugu dambeeyay ee dugsiga sare ama ay ka qalin jabiyeen Juun sanadkii hore.
Musharrixiinta waa inay qorsheeyaan inay bilaabaan waxbarashadooda Jaamacadda Toronto bisha Sebtember.
Codsadeyaasha horeyba u dhiganayay xarun dugsi sare kadib xaq uma yeelan doonaan.
Jaamacadda Carleton waxay siisaa dhowr kaalmo dhaqaale (Prestige scholarships) ardayda heer sare ah ee imanaya shahaadada koowaad ee jaamacadeed ee haysta celcelis 90% ama ka sareeya.
Deeqaha Prestige waxaa ka mid ah deeqda waxbarasho ee Chancellor, Richard Lewar Entrance Scholarship, Carleton University Scholarship of Excellence, Jaamacadda Carleton SHAD Scholarship, Riordon Scholarship, iyo Collins Prestige Scholarship.
Qiimaha Carleton Prestige Scholarships waa sida soo socota:
Toban Diyoodlaha Deeqaha: $ 30,000 ($ 7,500 x afar sano)
Toddoba Richard Lewar Entrance Scholarships: $ 21,500 ($ 6,500 sanadka ugu horeeya iyo $ 5,000 sanadka labaad, saddexaad, iyo afraad)
Saddex Kaalmooyinka Dugsi ee Carleton ee Sare u Qalanjabiyey: $ 20,000 ($ 5,000 x afar sano)
Laba Jaamacad Carleton University Shad Valley Deeqsiyo Sare: $ 20,000 ($ 5,000 x afar sano)
Hal deeq waxbarasho Riordon: Waxbarid buuxda sanadka koowaad, labaad, saddexaad, iyo afraad
Hal deeq waxbarasho oo ah 'Collins Prestige': Waxbarid buuxda sanadka koowaad, labaad, saddexaad, iyo afraad
Codsadeyaashu waa inay lahaadaan celcelis gelitaan 90% ama ka sareeya.
Musharrixiinta waa inay noqdaan arday cusub oo imanaya oo aan hore uga soo xaadirin xarumaha dugsiga sare kadib.
Jaamacadda Winnipeg ee deeqda waxbarasho ee Hogaamiyaasha Caalamka waxaa loo fidiyaa ardayda cusub ee caalamiga ah ee imanaya ee ka diiwaangashan qayb kasta oo ka mid ah qeybaha Jaamacadda iyada oo loo marayo shahaadada koowaad, qalin jabinta, kuliyada, PACE, ama ELP.
Qiimaha deeqda waxbarasho waxaa ka mid ah Barnaamijka Luqadda Ingiriisiga ($ 3,500), Xirfad & Shahaadada Sii-wadashada ee Waxbarashada ($ 3,500), Collegiate ($ 3,500), Shahaadada koowaad ($ 5,000), iyo Qalinjabinta ($ 5,000).
Codsadeyaashu waa inay noqdaan arday caalami ah oo ku cusub Jaamacadda Winnipeg oo aan qaadan buundooyin ama aan ku dhammaysan wax shahaado ah jaamacadda.
Musharrixiinta waa inay iska diiwaangeliyaan qayb kasta oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee Winnipeg: Shahaadada koowaad, Qalin-jabinta, Kulliyadaha, Xirfadleyda, Codsiga & Sii wadista Waxbarashada (PACE) ama Barnaamijka Luqadda Ingiriisiga (ELP).
Codsadeyaashu waa inay lahaadaan ugu yaraan 80% celcelis gelitaan ama u dhigma.
Musharrixiinta aan afkooda hooyo ahayn Ingiriisi ayaa looga baahan doonaa inay muujiyaan aqoonta luuqadda Ingiriisiga.
Jaamacadda Calgary waxay siisaa deeqo waxbarasho ardayda caalamiga ah ee heer sare ah ee bilaabaya barnaamijkooda shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Qaatayaashu waxay dib u cusbooneysiin karaan deeqda waxbarasho sannadka labaad, saddexaad, iyo afraad ee Jaamacadda Calgary, waa haddii ay sii wadaan GPA-da 2.60 AMA ugu yaraan 24.00 oo qaybood xilliyadii dayrta iyo jiilaalka ee hore.
Qiimaha abaalmarintu waa $ 15,000 sanadkiiba.
Jaamacadda York waxay siisaa deeq waxbarasho ardayda caalamiga ah ee ka diiwaangashan jaamacadda. Deeqdan waxbarasho waxaa la siiyaa ardayda leh diiwaanno tacliimeed oo aad u wanaagsan si ay ugu oggolaadaan inay ku sii wataan barnaamijyada shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Barnaamijyada tacliinta sare ee deeqda waxbarasho lagu dabaqo waxaa ka mid ah Daraasaadka Deegaanka, Farshaxanimada Fiican, Glendon, Caafimaadka, Lassonde, Farshaxanka & Daraasaadka Xirfadaha, Sayniska, ama Schulich.
Ku guuleystayaasha deeqda waxbarasho waxay heli doonaan $ 35,000 sanad dugsiyeedkiiba waxayna dabooli doontaa kharashka waxbarashadooda heerka koowaad, taas oo ka dhigeysa wadarta guud ee abaalmarinta inay noqoto $ 140,000.
Deeqda waxbarasho ee ugu sarreysa ee qalin-jabinta ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda oo dhan
Sida Loo Helo Deeqaha waxbarasho ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda Gudaha iyo Kuwa Caalamiga ah
Sida Loogu guuleysto PhD. Deeqaha waxbarasho ee Kanada
15 Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Qaangaarka ah ee Kanada
9 Deeqaha fiqiga ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
Previous Post:Jaamacadda Farshaxanka Alberta | Deeqaha waxbarasho | Kharashka waxbarashada | Gelitaan | Codsiga
Post Next:12-ka Jaamacadood ee ugu Jaban Talyaaniga ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
Gatwech Kueth Chuol wuxuu leeyahay,
June 21, 2021 at 9: am 16
Aan u rajeeyo inaan heli karo deeqda waxbarasho ee MBA